Maalinta: Abriil 23, 2020
4/7 Kaadifaalufka Asphalt Inta lagu gudajiray Mamnuuca 24-maalmood ee ka dhaca Bursa
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, oo 4-maalmood bandoow u rogtay fursad, waxay bilowday shaqo asphalt dhammaystiran oo ah marinnada waaweyn ee dhammaystiray nolosheeda dhaqaale. Dayactirka iyo hagaajinta, barkinta iyo codsiyada xuduudaha meelaha loo baahan yahay [More ...]
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca waxay la kulantay dhiggeeda Ingiriiska iyo Ruushka
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca, Wasiirka Caafimaadka Ingiriiska Matt Hancock iyo Wasiirka Caafimaadka Ruushka Dr. Wuxuu la kulmay Mikhail Murashko si gooni gooni ah. Wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray suurtagalnimada in iskaashi laga yeesho dagaalka ka dhanka ah faafitaanka Covid-19. dalalka [More ...]
Zehra Zümrüt Selçuk, Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, ayaa ku dhawaaqday in manfacyada shaqo la aanta lagu shubayo koontada ka-faa'iideystayaasha bishaan taasoo qayb ka ah tallaabooyinka ka hortagga coronavirus. Zehra Zümrüt Selçuk ayaa yidhi, "Marka la guda galayo la dagaallanka coronavirus [More ...]
Ka hor bisha Ramadaan ee Turkey Practice General Country lagu qabtay Peace Trust
Iyada oo xayiraadda bandooga la adeegsaday intii u dhaxeysay Abriil 23-26 iyo 31-na gobol ka hor Ramadaanka, suuqa, goob suuq, suuqyada wax iibsiga inta u dhaxaysa 15.00-24.00 shalay. [More ...]
Amsterdam Subway iyo Map
Gaadiidka dadweynaha ee Amsterdam waxaa bixiya basaska iyo taraamyada. Magaalada waxaa ku yaal afar laamood oo metro ah, safka shanaadna waa uu socdaa (laakiin waxay ku qaadaneysaa dhismo gaabis ah si looga fogaado in waxyeelo u gaysato maqaarka dabiiciga ah ee magaalada). Sidoo kale wadooyin badan [More ...]
IMM waxay heshaa caddeyn wax ku ool ah oo loogu talagalay Maalgelinta Mitirka
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul (IMM) ayaa heshay shahaadada dhiirigalinta ah ee maalgashiga gaadiidka tareenka ee dhulka hoostiisa mara oo 433 kiiloomitir dherer ah, iyada oo qiimaha maalgashigu yahay 13 milyan TL oo ku taal Istanbul. [More ...]
Tamarta Cudurka Faafa, oo ka socda garoonka diyaaradaha Atatürk, laga soo bilaabo 1920
BEDAŞ waxay asaastay xarun lagu badalo isbuuc gudihiis si loo daboolo baahiyaha koronto ee sariir-jiifka 19-sariirood, kaas oo dhisme ka socdo garoonka diyaaradaha Atatürk, inta udhaxeysa dagaalka ka dhanka ah dillaaca kovid-1000, iyo Abriil 23, Awoodda Qaranka. [More ...]
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), sida lagu sheegay hadal ka soo Agaasinka Guud ee taariikhaha u dhexeeya April 24 2020-7 May 2020; Xakamaynta weedhka tareenka ee u dhexeeya Malatya-Diyarbakır-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Van-Kapıköy, Malatya-Çekinkaya iyo saldhigyada Malatya-Narlı iyo [More ...]
Gegada Diyaaradaha ee TAV ayaa Shaaciyay Natiijooyinkiisa Maaliyadeed ee Ugu Horeeya
Waxay u adeegtaa 10,6 milyan oo rakaab ah saddexda bilood ee ugu horreysa sanadka, shirkadda waxay sheegtey in dhammaan garoomada diyaaradaha ay xireen sababo la xiriira mamnuucid safar oo la timid dillaaca COVID-19. Turkey waa brand dunida ee keentay in diyaarad wadeen garoonka diyaaradaha, Maddaarada tav bilood ee hore [More ...]
23-ka Abriil hambalyo ayaa ka bilaabatay Izumir shan bas oo waaweyn oo furan
Dabaaldegyadii qarnigii la soo dhaafay ee Abril 23-keedii Qaranimada iyo Maalinta Caruurta ayaa ka bilaabatay magaalada İzmir. Kooxda Izmir Metropolitan Mun Band iyo guutada muusikada Izmir waxay socod ku mareen wadooyinka Izmir iyagoo wata shan bas oo furan. Dadka degan Izmir ayaa iyaguna bilaabay [More ...]
Riwaayadda Qarniga Taariikhiga ah ee Izmir Bay kana socota Haluk Levent
Haluk Levent wuxuu ku sugnaa Izmir bartamihii qarnigii Abriil 23, Awoodda Qaranka iyo Maalinta Caruurta. Iyada oo qayb ka ah tallaabooyinka coronavirus, Levent wuxuu ku heesay Izmir dhan markab ku yaal Gacanka. Dadka deegaanka Izmir ayaa raacay Levent iyagoo shidkaba shidida nalalka guryahooda. [More ...]
Wasiirka Wershadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa sheegay inay bilaabeen shaqo ku saabsan aaladda daryeelka neefsashada degdegga ah, kuwaas oo muhiimad weyn ka helay cudurka 'coronavirus' ee cusub '(Kovid-19),' Sida loo sameeyo wax soo saar ballaaran oo aaladda neefsashada guryaha ah ee loo yaqaan 'Biosys'. [More ...]
Codsiyada Taageerada Mushaharka ee loogu talagalay Shaqaalaha Fasaxa Bixinta ah Bilaabmay
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa ku dhawaaqday in nidaamka codsiyada Taageerada Lacag Bixinta maanta la bilaabay. Wasiirka Selçuk wuxuu yidhi, Shaqo-bixiyeyaashayada ayaa soo ogeysiiyay ogeysiisyada SSI ee ku saabsan shaqaalahayaga https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi cinwaanka [More ...]
Turkey ayaa horumar la taaban karo ee 18 sano ee la soo dhaafay dhismaha ka qotaan. Dhererka tunelada la dhisay intii u dhaxeysay 2003-2019 waxay gaareen 408,2 kiiloomitir. Tirada guud ee sugnan dalka Turkiga ee sanadka 353 oo kaliya 2019 43 kiiloomitir ... [More ...]
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa la kulmay madaxweynaha TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu, xubnaha TOBB iyo xafiisyada barnaamijka "Webinar Information Gunnation Information Webinar" oo ay soo qabanqaabiyeen qaab shir video ah. [More ...]
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca ayaa hadal ka jeedisay shirka jaraa'id ee la qabtay ka dib Shirka Sayniska Cudurka Fududeynta oo lagu qabtay Bilkent Campus iyada oo lagu qabtay shir fiidiyow. Wasiirka caafimaadka Fahrettin Koca ayaa warbixin ka bixisay hanaanka halganka oo tidhi, "coronavirus, [More ...]
Sannad-guurada 23aad ee Qarannimada iyo Maalinta Carruurta!
Maanta, waxaan la kulannaa sannadguuradii 23aad ee 100-ka Abriil, markii ay na soo martay xaalad adag. Abriil 23; Waa maalintii furitaanka Golaha Qaranka ee Turkiga, oo la aasaasay ka dib markii xornimada la helay iyada oo la bixinayo qiimo aad u badan oo ka dhan ah boqortooyada, laakiin ay tahay kaliya fasaxa carruurta ee adduunka. [More ...]
Abriil 11 iyo Ramadaan Bayaan uu soo saaray 23 Duqa Magaalada CHP
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Metromitania Tunç Soyer, Duqa Magaalada Metropolitan Zeydan Karalar, Eskişehir Duqa Magaalo Weyn Yılmaz Büyükerşen, [More ...]
Maanta taariikhda: 23 April 1931 River-Cankırı (102 km.)
Taariikhda Maanta, Abriil 23, 1903 Raiisel Wasaaraha Ingiriiska Balfour wuxuu ku dhawaaqay Aqalka Guud in aysan sinaba u noqon doonin shuraako isla markaana aysan taageeri doonin Wadada Tareenka ee Baqdaad. 23 Abriil 1923 Deutsche on Anatolia iyo Baghdad Railway [More ...]